Dib-u-warshadaynta Shiinaha caaga soosaarayaasha iyo alaab-qeybiyeyaasha | FAYGO
Awood (kg / saacad)
SJ-85 SJ85 / 33 85mm 33 100-150kg / saacaddii
SJ-100 SJ100 / 33 100mm 33 200kg / saacad
SJ-120 SJ120 / 33 120mm 33 300kg / saacad
SJ-130 SJ130 / 30 130mm 33 450kg / saacad
SJ-160 SJ160 / 30 160mm 33 600kg / saacad
SJ-180 SJ180 / 30 180mm 33 750-800kg / saacad
Hore: Mashiinka dhalada qoorta dhalada ah ee balaastigga ah oo otomaatig ah
Xiga: Mashiinka Xashiishadda
Waxaa badanaa loo isticmaalaa soo-saarista thermoplastics, sida PE, PP, PS, PVC, ABS, PC, PET iyo waxyaabo kale oo caag ah. Qalabka durdurrada ee khuseeya (oo ay ku jiraan mooud), waxay soo saari kartaa noocyo kala duwan oo badeecooyin caag ah, tusaale ahaan dhuumaha caagga ah, astaamaha, baarka, xaashi, granules caag ah iyo wixii la mid ah.
Taxane SJ extruder hal fur waxa uu leeyahay faa'iidooyinka wax soo saarka sare, plasticization aad u fiican, isticmaalka tamarta yar, orodka deggan. Gearbox-ka hal-ku-dhejiyeha fureyaasha ahi wuxuu qaataa sanduuqa marshada sare, oo leh astaamo buuq yar, awood qaadid sare, nolol adeeg dheer; sccrew iyo foostadu waxay qaataan 38CrMoAlA wax, oo leh daaweynta nitriding; mootadu waxay qaadataa heerka caadiga ah ee Siemens; rogaal celiyaha wuxuu qaataa inverter ABB; xakamaynta heerkulka waxay qaataan Omron / RKC; Korontoleyda cadaadiska yar ayaa korsada Schneider koronto.
Mashiinka noocan ah ee kaarboonka kaarboonku buuxiyo wuxuu isku daraa dhaqida, buuxinta iyo shaqooyinka goos gooska wareega hal cutub.Waa qalab xirxira dareeraha oo si buuxda otomaatig ah uguna sareeya.
Si otomaatig ah u buuxi oo u deji xakamaynta hawada gelinta si otomaatig ah. Kombaresaruhu wuxuu si otomaatig ah u bilaaban doonaa markii uusan jirin cadaadis, wuxuuna joojin doonaa shaqada markii cadaadisku ka buuxo haanta hawada. Marka kombaresarada korontadu ka go'do, korontadu waxay noqon doontaa mid rogan. Marka cadaadisku aad u sarreeyo, heer kulku sidoo kale wuu sarreeyaa, kaas oo iskiis u ilaalin kara si otomaatig ah. Waxaad isticmaali kartaa kombaresaradayada adigoon wax shaqaale ah heeganka ku ahayn.
Khadkan buuxinta biyaha wuxuu si gaar ah u soo saaraa gallon biyo dhalo ah oo dhalaalaya, noocyadooda (b / h) waa: 100 nooc, 200 nooc, 300 nooc, nooca 450, 600 oo nooc ah, nooca 900, nooc 1200 ah iyo nooc 2000 ah.
PERT dhuumaha kululaynta dhulka